Edere site Tranquillus | Sep 30, 2018 | Edere ederede na nkwupụta okwu ọnụ
mbinye aka email bụ kaadị azụmahịa nke na-agụnyekarị njikọ na adreesị ozi-e ma ọ bụ saịtị ntinye aka. A na-eguzobekarị ya site na ịtinye njirimara na nrụtụ aka ọkachamara nke ụlọ ọrụ. mbinye aka email dị na mbara igwe B ruo B ma ọ bụ na mgbanwe n'etiti ndị ọkachamara ebe ozi-e ka nwere ebe dị mkpa. A na-agbakwunye mbinye aka email na njedebe nke email ọ bụla na ọ na-enye ohere ka ndị na-emekọrịta ihe gbanwee nkọwa kọntaktị ha na ọrụ ha. Ịmepụta mbinye aka email anaghị adị mfe mgbe niile, ị ga-amarịrị ụfọdụ echiche nke koodu HTML, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịchọrọ igosipụta mbinye aka gị ma ọ bụ jikọta njikọ. Mana enwere ngwaọrụ na webụ nwere ike iwepụta mbinye aka omenala. Nke a bụ ntuziaka maka ịmepụta mbinye aka email n'ịntanetị.
Usoro nhazi iji mepụta ozi ịntanetị gị n'ịntanetị
Iji malite mmalite nke ya email mbinye aka, ọ dị mkpa ịkpọtụrụ onwe gị na nkọwa ọkachamara dịka aha nna gị, aha mbụ, aha ụlọ ọrụ gị na ọnọdụ gị, nọmba ekwentị gị, ebe nrụọrụ weebụ gị, wdg. Mgbe nke a gasịrị, ịnwere ike itinye foto n'onwe gị, yana kọntaktị ụlọ ọrụ gị iji gosi gị ntinye ederede email. Mgbe ahụ, ọ ga-ekwe omume ịtinye njikọ na netwọk mmekọrịta gị dika Facebook, Twitter, Instagram, Google+, LinkedIn, wdg.
Thus ga - esi otú a mee ka ọhụhụ gị dị ka akụkụ nke atụmatụ ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ akara aka gị. Ozugbo ndị a preliminaries na-eme, ị ga-ahọrọ ihe online ọrụ ike gị ndebanye ozi mail mere iji tụọ. Ọtụtụ ndebiri ga-ekwe omume dịka ngwọta nke ga-enwe mmasị gị ma ị ga-enwe ike ịmezie ha site na ịmepụta nha, ụdị, ụcha nke ederede, ụdị na agba nke akara ngosi nke netwọk mmekọrịta.
Kedu esi emepụta mbinye aha email gị na Gmail?
O kwere omume igbanwe ma ọ bụ mepụta gị mpempe akwụkwọ na kọmputa na Gmail ma ị na-eji PC, ama ama, gam akporo ma ọ bụ iOS. Na PC, naanị mepee Gmail ma pịa "Ntọala" na nri aka nri. N'otu oge na ntọala, ị ga-ahụ otu "mbinye aka" na site na ịpị ya, ị ga-enwe ike itinye ma gbanwee mbinye aka gị dị ka ịchọrọ. Ozugbo usoro ahụ zuru ezu, pịa "zọpụta" na ala nke ibe ma chekwaa mgbanwe na mbinye aka gị. Na Smartphone na mbadamba, ị ga-ebu ụzọ nweta ngwa Gmail maka tinye ọkachamara email mbinye aka na akaụntụ gị.
GỤỌ Kedu otu esi dee ozi ịntanetị doro anya na ọkachamara?
Ị ga-eme kpọmkwem otu ihe na ngwaọrụ iOS ma ọ bụrụ na ihe nkesa ozi ga-akọwawa mbinye aka gị iche na ọ nwere ike ịpụta dị ka ma ọ bụ mgbakwunye ma ọ bụ foto. Ọ bụrụ na Mac ma ọ bụ ngwaọrụ iOS ndị ọzọ ejikọrọ na akaụntụ iCloud Drive gị, mbinye aka gị ga-edozi ma ọ bụrụ na ọ dị na ngwaọrụ niile ejikọrọ. Ọbụna ọ ga-ekwe omume ịnye email faịlụ PDF.
Ịmepụta ntinye aka na Outlook
Site na Outlook, usoro a dịtụ iche, mmadụ nwere ike ịmepụta otu ma ọ bụ karịa mbinye aka ma hazie ha maka ozi email ọ bụla. Ọ bụrụ na ị nwere ụdị Outlook nke kpochapụla, ụzọ kachasị mfe bụ ịbanye na menu faịlụ wee họrọ "Nhọrọ". Na ngalaba a, pịa "mail" wee họrọ "Akara aka". N'ọkwa a, ọ dị mkpa ịmalite site na ịhọrọ otu akaụntụ email ma ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ. Ndị ọzọ bụ iji mejupụta ozi dị ka usoro bụ isi. Ihe siri ike ga-abụ ịhọrọ site na ọtụtụ nhọrọ mgbanwe dị.
Ọ bụrụ na ị na-eji Outlook na HTML, ọrụ ahụ ga-adị nro karịa na nsụgharị kpochapụwo. maka mepụta ozi ịntanetị gị n'ịntanetị na HTML, ị ga-eji Microsoft Okwu ma ọ bụ nchịkọta weebụ. Ngwọta a dị irè karị mgbe enweghị ihe oyiyi maka ihe atụ. Na Okwu, anyị na-agbaso usoro isi na n'ikpeazụ, anyị echefughị ​​iji chekwaa akwụkwọ ahụ na usoro HTML. Ma, nsogbu na-eme mgbe nile na usoro a karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-eji Okwu.
Iji dozie nsogbu nke onyinyo ma ọ bụ logo nke gosipụtara dịka ihe mgbakwunye, a chọrọ ihe ngwọta, na nke mgbanwe nke koodu HTML. Iji mee nke a, ị ghaghị dochie ụzọ mpaghara nke URL nke onyinyo ahụ ka ị ghara izipu ihe osise ahụ email mbinye aka dịka mgbakwunye na iji kwekọrịta mbinye aka gị na ozi ịntanetị gị niile, ọbụlagodi ndị ezigoro. A rụchara ọrụ a site na ịpịgharị HTML faịlụ n'ime ndekọ dabere na ụdị Windows (na Windows 7, ndekọ a na-ekwu okwu ya ga-abụ C: \_ Users \_ username \_ AppData \_ Roaming Microsoft \_ Signatures \_).
Ngwaọrụ ịmepụta ngwa ngwa ma ọ bụ ịbanye na mbinye n'efu
Tinye ọkachamara email mbinye aka na akaụntụ gị adịghị mfe karịsịa ma ọ bụrụ na ịnweghị echiche ọ bụla nke koodu HTML. Ụzọ dị mfe iji mee ka ihe dịkwuo mfe bụ iji ngwá ọrụ dị n'ịntanetị na-emepụta mbinye aka email n'efu. A na-edepụta ọtụtụ ngwaọrụ ruo ụbọchị, gụnyere MySignature. Ngwá ọrụ a nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndebiri ma kwekọọ n'ọrụ niile. Ọ nwere usoro bụ isi maka ịmepụta ndebanye ozi mail gụnyere mgbakwunye nke ozi kọntaktị, netwọk mmekọrịta, logo, wdg.
GỤỌ Master ọdịnaya na ụdị na gị ihe odide
Na mgbakwunye, MySignature nwere njikọ njikọta nke a ga-agbakwunye na akara ngosi nke akụkọ ya na netwọk mmekọrịta. N'ihi njikọ a, anyị ga-esi otú a mara ọnụ ọgụgụ clicks na-eme ekele maka mbinye aka a. Ngwaọrụ a na-enye gị ohere ịmepụta mbinye aka maka Gmail, Outlook, Email mail, wdg. Iji mezuo ojiji na mepụta mbinye aka gị, ozi ịntanetịị ga-aga na ebe nrụọrụ weebụ ya ma pịa "Mepụta mbinye akwụkwọ ozi ederede". A ga-eduga gị na peeji nke nwere ụzọ abụọ e ji emepụta aka, otu akpaaka na ntuziaka ọzọ.
A na-eme usoro akpaka na iji akaụntụ Facebook ma ọ bụ LinkedIn. A na-emekwu usoro ntuziaka nke ọma site na ijuputa oghere ndị a haziri maka nzube a ma nwee ike ịhụcha mbinye aka gị tupu ịchekwa data ahụ. Ọrụ ahụ dị mfe, ọ dịghị ewe karịa 5 nkeji. Tụkwasị na nke ahụ, iji MySignature bụ n'efu ma achọọghị ndebanye aha. Maka ndị na-adịghị eji ọrụ email dị ka Gmail ma ọ bụ Outlook, koodu HTML dị.
Dịka ngwá ọrụ ọzọ, anyị nwere Zippisig, nke yiri MySignature dịkwa mfe iji ya ngwa ngwa na ngwa ngwa ịmepụta ntinye aka na kọmputa. Zippisig na-enye ihe niile dị mkpa iji mepụta mbinye aka (ịkọ ozi, agbakwunye akara ngosi na akara ngosi netwọk mmekọrịta netwọk). Ihe dị iche bụ na ọ bụ n'efu maka otu izu na na karịa oge a, ọ na-akwụ ụgwọ ya.
Ma ọ bụghị na enwerekwa Si.gnatu.re, zuru oke ma dịkwa mfe iji mepụta mbinye aka email ma hazie ya dịka ịchọrọ. Ọ bụ 100% n'efu ma nye ohere nke ịhazi font, agba, nha akara ngosi nke profaịlụ netwọkụ mmekọrịta, ọnọdụ nke onyonyo ma ọ bụ akara ngosi na ntinye nke ederede. Ihe dị na ngwa a bụ na ọ bụ ntụnye na ọtụtụ netwọkụ mmekọrịta, nke na - eme ka ọ dị mfe ibugharị kọntaktị na akaụntụ gị.
E nwekwara Onye Okike Edenye Aka nke bụ n'ezie ngwá ọrụ kachasị mfe maka ịmepụta aha ịntanetị. Ọ bụghị iwu na ị ga-edebanye aha ya ma ọ bụ n'efu. Site na nkwekọrịta, ọ dị ntakịrị na nhazi, ọ na-enye nanị otu ụdị. Mana ọ bụ ọkachamara ma nwekwaa ike imeghari na mpaghara niile nke ọrụ. Ozugbo e kere eke zuru ezu, a na-enye gị koodu koodu HTML iji tinye ya na ozi gị.
WiseStamp bụ ngwá ọrụ dịtụ iche n'ihi na ọ bụ nkwụsị Firefox. Ọ na-enye ohere mepụta ozi ịntanetị gị n'ịntanetị maka adreesị ozi ịntanetị gị (Gmail, Outlook, Yahoo, wdg.) Ya mere, ọ bụ ọrụ a tụrụ aro ma ọ bụrụ na anyị na-ejikwa adreesị ozi-e ọtụtụ. Ị ga-arụnye WiseStamp iji jiri ya na zuru ezu hazie ozi email gị. Na mgbakwunye na ọrụ ndị bụ isi, ngwá ọrụ ahụ na-enye ohere ịtinye ndepụta RSS na mbinye aka ya, nke ga-agbakwunye isiokwu gị ma ọ bụrụ na ị nwere blog. Ọ na-enyekwa ohere ịdebanye aha ma ọ bụ ịme vidiyo YouTube. Mgbakwunye ahụ na-enye ohere ka ịmepụta ọtụtụ ndebanye aha maka nke ọ bụla n'ime adreesị email ya.
Hubspot's email signature generator also is a tool to generate ndebanye ozi mail. O nwere uru nke ịbụ nke oge a, mara mma ma dị mfe. Ọ na-enye nkwekọrịta doro anya, na-enweghị nghọta ma dị mfe ịchọta ozi niile dị mkpa. Njikwa a nwere uru nke ịmepụta oku iji mee ka ndị ọrụ gị kwadata akwụkwọ ọcha gị ma ọ bụ ịdenye aha gị. Tụkwasị na nke a, ngwá ọrụ a na-enye bọọgụ ntinye aka iji tinye na mbinye aka ya.
N'ikpeazụ, anyị nwekwara ike ikwu okwu gbasara Nkwado Email, ngwá ọrụ ọzọ nke na-eme ka ihe ndị e kere eke na nkeonwe nke a ozi mbinye n'efu n'efu. Ngwa ngwa ma dị mfe, ọ na-enye ọrụ ndị dị mkpa dị mkpa mepụta ozi ịntanetị gị n'ịntanetị. Jiri ma ọ bụrụ na ịchọghị itinye foto ma ọ bụ logo na ị nweghị ọnụnọ na netwọk mmekọrịta.
Otu esi emepụta mbinye aka email gị ozugbo ma ọ bụ n'efu September 21st, 2018Tranquillus
gara agaKedu esi eweghachi mkpali gị mgbe oge siri ike?
-esonụNchọpụta nke Cordial Pro Orthographic Retouching Software.